10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အကောင်းဆုံးအစားအစာစျေးကွက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အကောင်းဆုံးအစားအစာစျေးကွက်များ
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 31/01/2021)
သင်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခရီးသွားနိုင်သည်, သင်မူကားအစားအစာမှတဆင့်နေရာတိုင်း၏အကောင်းဆုံးတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်. ငါတို့ 10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအကောင်းဆုံးစားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်များကသင့်အားလူများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များအားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မည်, ယဉျကြေးမှု, သမိုင်း, နှင့်မည်သို့ရောနှောနေခြင်း, အဆိုပါခေါက်ဆွဲကနေကိုက်နှင့်အတူ, ကြယ်ပွင့်အသီး, နှင့်ဝက်အူချောင်း. ဖြည့်စွက်ကာ, မလုံလောက်ဘူးဆိုရင်, သငျသညျအစဉ်အမြဲအစားအစာဆိုင်ခန်းကိုမေးနိုင်ပါတယ်’ အတွင်းရဲ့အကြံပေးချက်များအဘို့အပိုင်ရှင်များ, ဥရောပကနေတရုတ်အထိ.
1. Nice တွင် Cours Saleya စားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်
Nice တွင်အကြီးမားဆုံးပြင်ပစျေးကွက်သည် Old Nice ရှိ Cours Saleya ရှိစားသောက်ကုန်နှင့်ပန်းပွင့်ဈေးကွက်ဖြစ်သည်. ဒီနေရာမှာလတ်ဆတ်တဲ့ pastry ကိုတွေ့လိမ့်မယ်, ဒိန်ခဲ, အမှတ်တရပစ္စည်းများအဖြစ်ပြန်ရောက်လာရန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်, နှင့်ဒေသခံခဲဖွယ်စားဖွယ်.
အကောင်းဆုံးပြင်သစ်အစားအစာကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရုံတင်မကဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကလတ်ဆတ်တဲ့ပင်လယ်လေထုထဲတွင်အားလုံးတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်. ပန်းများအနီးအနားတွင်ရပ်နေတဲ့အဘို့အ setting ကိုဖြည့်စွက် အံ့သြဖွယ်အချက်အပြုတ်အတွေ့အကြုံကို.
Nice ရဲ့အံ့သြဖွယ်အစားအစာစျေးကွက်မနက်တိုင်းသင်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မည်, တနင်္လာနေ့ မှလွဲ၍.
2. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအစားအစာစျေးကွက်များ: လန်ဒန်မြို့ရှိ Borough စျေးကွက်
လန်ဒန်မြို့သည်၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစျေးကွက်များကြောင့်လူသိများသည်, လှပသောရပ်ကွက်, နှင့်ထူးခြားသော vibes နှင့်အတူလမ်းများ. အဘယ်အရာကိုမျှလန်ဒန်ရဲ့အစားအစာစျေးကွက်အတွက်အထူးနှင့်သွက်လေထုနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်, နှင့် Borough အစားအစာစျေးကွက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်.
ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးလမ်းပေါ်အစားအစာကိုတွေ့လိမ့်မယ်: Kappacasein ဒိန်ခဲကင်, ရှေ့တွင် pastries နှင့်ကိတ်မုန့်, ဒေါ်. King ရဲ့ဝက်သား pies, နှင့်လောဘဆိတ်သငယ်ရဲ့ အချိုပွဲများအတွက်ရေခဲမုန့်. ဤအံ့ဖွယ်စျေးကွက်သည် visitors ည့်သည်များကိုနေ့တိုင်းကြိုဆိုသည်, နောက်ဆုံးအတွက် 1,000 နှစ်ပေါင်း, နှင့်လန်ဒန်ရဲ့ထိပ်တန်းအထင်ကရအဆောက်အတစ်ခုဖြစ်သည်.
3. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအစားအစာစျေးကွက်များ: ပေကျင်းရှိ Sanyuanli စျေး
ထူးခြားဆန်းပြားအသီးများနှင့်ရှားပါးအစားအစာများ, Sanyuanli သည်ပေကျင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. စားဖိုမှူးဈေးကွက်နှင့်ဒေသခံစားဖိုမှူးများနှင့်အနောက်တိုင်းသားများသည်ကြယ်ပွင့်သစ်သီးနှင့်လတ်ဆတ်သောအစားအစာများကိုဝယ်ယူရန်လာကြသည်, နှင့်တင်သွင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်
ဒါကြောင့်, သင်မီးဖိုချောင်တွင်စမ်းသပ်ကြိုက်လျှင်, မှုတ်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒီနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. Sanyuanli အစားအစာစျေးကွက်တွင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုရှာနိုင်သည်, လက္ကားစျေးနှုန်းများမှာ, ဒါပေမယ့်ငွေသာပေးရမယ်. Sanyuanli စားသောက်ကုန်စျေးသည် Chaoyang ခရိုင်တွင်ရှိပြီးနေ့စဉ်ဖွင့်သည်.
4. မြူးနစ်တွင်အကောင်းဆုံးအစားအစာစျေးကွက်: အဆိုပါ Viktualienmarkt
သင်ကအစောပိုင်းငှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်မှာ6သငျသညျလတ်ဆတ်သောပြသနာတွေရှိတဲ့ကော်ဖီနှင့် pretzels ရနံ့နှင့်အတူကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်၏. Karnoll ၏ pastry stand သည်ဘာလင်ရှိ Viktualienmarkt အစားအစာဈေးကွက်တွင်ဖွင့်လှစ်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးစားနပ်ရိက္ခာစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဒီမြူးနစ်ရဲ့အထူးအပြင်, Viktualienmarkt တွင်အဖြူရောင်ဝက်အူချောင်းနှင့်အခြား Bavarian အစားအစာများကိုမြည်းစမ်းပါလိမ့်မည်. Frauenstrasse နှင့် Heiliggeistkirche အကြားရင်ပြင်၌, သငျသညျလယ်သမားရဲ့စျေးကွက်နှင့် Muncheners အစည်းအဝေးရာအရပျရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
5. တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးအစားအစာစျေးကွက်များ: Kowloon City ဟောင်ကောင်ရှိစိုစွတ်သောစျေးကွက်
၏ထူးချွန်အရေအတွက်နှင့်အတူ 581 တငျးကု, Kowloon အစားအစာဈေးကွက်သည်ဟောင်ကောင်၏အကြီးဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်သည်. သငျသညျကနေနေ့စဉ်ဒီအံ့သြဖွယ်စျေးကွက်ဖွင့်လှစ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်6နံနက်မှ 8 ညနေ, ရုံရုံ 14 Lok Fu ဘူတာမှလမ်းလျှောက်။ မိနစ်အနည်းငယ်. Kowloon စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်မီးများဖွင့်သည့်အချိန်ညတွင်ဖြစ်သည်, နှင့်အစားအစာပွဲတော်စတင်.
Kowloon City Wet စျေးကွက်သည်အကောင်းဆုံးလတ်ဆတ်သောထုတ်ကုန်များကိုပေးသည်, ပင်လယ်စာကနေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအထိ. ဒီစျေးကွက်ကအရမ်းကြီးတယ်, သင်တို့ရှိသမျှကိုဖုံးလွှမ်းရန်တစ်ခုလုံးကိုတစ်ရက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်3ပုံပြင်များ, ဟောင်ကောင်နံနက်စာနှင့်နေ့လည်စာနှင့်ညစာမှစတင်ခဲ့သည်. ဤတွင်ထိုင်းလူ ဦး ရေအများဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ထိုင်းအစားအစာများကိုမြည်းစမ်းခြင်းပါဝင်သည်.
Kowloon စျေးကွက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအချက်မှာလူအုပ်ကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်. ထို့ကြောင့်, လူကြိုက်အများဆုံးဆိုင်ခန်းများနှင့်စတိုးဆိုင်များသည်လတ်ဆတ်သောထုတ်ကုန်များကိုပေးသည်, မြင့်မားသောထုတ်ကုန်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
6. Bologna အီတလီနိုင်ငံရှိ Quadrilatero စားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်
balsamic အဆီများ၏အံ့သြဖွယ်ရနံ့နှင့်အတူ, ခေါက်ဆွဲအမျိုးမျိုး, နှင့် mortadella, အဆိုပါ Quadrilatero အစားအစာစျေးကွက်ပကတိအချက်အပြုတ်ကောင်းကင်ဘုံသည်. သင်သဘောတူပါလိမ့်မယ် အီတလီအစားအစာ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့်လမ်းအစားအစာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အစားအစာဇယားထိပ်ဆုံး.
သင့်မှာအခန်းရှိသေးတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်အအေးဖြတ်၏ Romanzo ရဲ့ tagliere အဆိုပါအာရုံတစ်ခုပွဲတော်ဖြစ်လိမ့်မည်. သငျသညျဤမြင့်မြတ်သောအစားအစာစျေးကွက်အနီးတွေ့ပါလိမ့်မယ် Piazza Maggiore, တနင်္လာနေ့မှစနေနေ့အထိဖွင့်လှစ်ပါ.
တစ်ရထားနှင့်အတူ Bologna မှဗင်းနစ်
Florence Bologna to Train နှင့်အတူ
ရထားနှင့်အတူ Bologna သို့ရောမ
မီလန် Bologna သို့ရထားနှင့်အတူ
7. K သည်AdeW ကဘာလင်ရှိစားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်
KadeWe စားသောက်ကုန်စျေးကွက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဈေးအကြီးဆုံးအစားအစာစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည် 10 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးစားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်များ. ဤသည်ဂျာမန်အစားအစာစျေးကွက်ဘာလင်ရဲ့ထိပ်တန်းစတိုးဆိုင်များတတည်ရှိပြီးတစ်ခုလုံးကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့သည်.
ထို့ကြောင့်, ဒါကြောင့်အစားအစာခန်းမင်ပေမယ့်, သငျသညျ KadeWe အစားအစာစျေးကွက်တွင်မတူနိုင်တဲ့အစားအစာများကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်. ဥပမာ, သငျသညျဖန်စီဒိန်ခဲလျှင်, ထိုအခါ 1300 သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှာကွဲပြားခြားနားသောဒိန်ခဲ. သို့မဟုတ်, လက်ရာမြောက်သောအချိုပွဲများနှင့်ရိုးရာ wurst, KadeWe စားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်အဖြစ်, အကောင်းဆုံးနှင့်အရသာအရှိဆုံးအစားအစာများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်.
8. ပဲရစ်မှာ Bastille စားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်
ပဲရစ်ရှိအကြီးမားဆုံးစားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်တွင်ညစာစားခြင်းသည်အစားအသောက်နှစ်သက်သူတိုင်းလုပ်သင့်သောအရာဖြစ်သည်. ကြီးမားသောစျေးကိုတော်လှန်ရေးကြီး၏အမည်ဖြင့်အမည်ပေးခဲ့သည်. ဒါကြောင့်ပဲရစ်ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်အားလုံးကိုမင်းမျက်လုံးတွေနဲ့မြည်းကြည့်နေမှာပါ.
တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်သင့်ကိုပွင့်လင်းသောလက်နက်များနှင့်ပြင်သစ်ချစ်သူများနှင့်ကြိုဆိုလိမ့်မည်. သငျသညျဒေသခံများနှင့်ရောနှောခြင်းနှင့်ပြင်သစ်မုန့်ညက်အတွက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒိန်ခဲအသစ်, နှင့်အလွဝက်အူချောင်း. ရုံ Boulevard Richard Lenoir ကို ဦး တည်, တဖန်သင်တို့အံ့သြဖွယ်အစားအစာဆိုင်ခန်းအရေအတွက်မြင်ရပါလိမ့်မယ်, ရနံ့, နှင့်အရောင်များ.
9. ဗင်းနစ်ခုနှစ်တွင် Rialto ငါးစျေးကွက်
၏ဘဏ်များတွင် Grand Canal, သငျသညျဗင်းနစ်အတွက်အသက်အကြီးဆုံးအစားအစာစျေးကွက်တွေ့လိမ့်မယ်, Rialto ငါးစျေးကွက်. ဗင်းနစ်အတွက်ဗဟိုတံတားပြီးနောက်အမည်ရှိ, Rialto ငါးစျေးကွက်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ပင်လယ်ငါးအမျိုးမျိုးနှင့် Venetians များနှင့်နီးကပ်စွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ခြင်းကိုကမ်းလှမ်းထားသည်.
Rialto စျေးကနေပွင့်နေပြီ 8 နေ့လည်စာစားသည်အထိ, အင်္ဂါနေ့မှစနေနေ့အထိ. သင် Pescheria နှင့် Erberia ဘေးချင်းယှဉ်။ တွေ့လိမ့်မည်, ဒါကြောင့်နေ့လည်စာအတွက်သင်လိုအပ်တာမှန်သမျှရနိုင်သည်, လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှပင်လယ်ရေမှဖြောင့်သောရေကောင်သို့ရောက်သည်.
10. ရောမမှာ Testaccio စားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်
စိုစွတ်သောအီတလီရက်များသို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီတွင်မိုးရာသီစနေ၊, Testaccio အစားအစာစျေးဟာရောမမှာအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဤအံ့ဖွယ်ကောင်းသောစားသောက်ကုန်စျေးသည်ရောမရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာတွင်တည်ရှိသည်, ဒါကြောင့်သင်ရှေးဟောင်းသမိုင်းနှင့်အတူ seasoned လတ်ဆတ်တဲ့ခေါက်ဆွဲတစ်ပန်းကန်ပေါ်ကိုက်ပါလိမ့်မယ်.
Testaccio စျေးကွက်ကို Testaccio ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပြောင်းရွေ့ပြီးကတည်းက Testovo ဟာစျေးကွက်ကို Nuovo Mercato လို့ခေါ်တယ် 80 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. သို့သျောလညျး, သင်ဆဲအဟောင်းလမ်းအစားအစာသေတ္တာများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, box ထဲမှာကိုက်များနှင့် Vali ရဲ့အသားညှပ်ပေါင်မု 90, box ထဲမှာ Casa Manco ရဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ပီဇာ 22, အများအပြားကပို.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်မမေ့နိုင်သောအချက်အပြုတ်စွန့်စားမှုတစ်ခုကိုကမ္ဘာအနှံ့ရထားဖြင့်စီစဉ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအကောင်းဆုံးအစားအစာစျေးကွက် ၁၀ ခု” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-markets-world%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, zh-CN ကို / fr သို့ / / de နှင့်အခြားဘာသာစကားများကိုလဲပြောင်းနိုင်သည်.
BestFoodMarketsInChina BestFoodMarketsInEurope BestFoodMarketsInTheWorld BestNightMarketsChina BestPlacesToEatEurope အစားအသောက် ။